‘दिदीका कारण जेल जानबाट बचेँ’ | Nagarik News - Nepal Republic Media
‘दिदीका कारण जेल जानबाट बचेँ’
२४ असार २०७५ १९ मिनेट पाठ
‘आइपुग्नुभयो, आउनुस् आउनुस्,' वातावरणविद् कृष्ण सिग्द्यालको महाराजगंज, चक्रपथ, अन्नपूर्ण मार्गस्थित घरको गेट खोलेपछि बाहिर बसिरहेका सिग्द्यालले निकै हर्षित मुद्रामा हामीलाई स्वागत गरे । उमेरले उनी ७४ वर्ष भइसके तर उनको बोलाइ, शरीरले त्यसो भन्दैन । त्यसमाथि गहिरो अध्ययन, चिन्तन, मनन गरिरहने उनको बानी पहिलेको झैं छ । उनलाई कसैले पनि ७४ वर्षको भइसके भनेर लख काट्न सक्दैन । उनलाई हेर्दा लाग्छ, ‘यदि हामी लगनशील, चिन्तन गर्ने र निरन्तर खट्ने हो भने सायद रिटायर्ड लाइफ भन्ने नै हुँदैन कि !’
‘कत्तिको फुर्सद छ ? एकछिन चराचुरुङ्गी हेर्ने कि’ यति भनेर उनले हामीलाई आफ्नै घरमा पालेका विभिन्न प्रजातिका चराचुरुङ्गी देखाए । चराप्रतिको उनको मोह हेर्दा यस्तो लाग्थ्यो हामी सबैले यसरी नै आफ्नो रुचिअनुसारका जीवजन्तु, चराचुरुङ्गी राख्न सके मानव जातिको प्रकृतिसँग तादात्म्यता बढ्थ्यो कि ! उनलाई भने पुस्तैनी देन नै रहेछ यसमा । हामीमध्ये कतिलाई थाहा छ– चराचुरुङ्गी पनि मान्छे जस्तै खुट्टा पसारेर कोल्टो परेर मज्जासँग घाममा सुत्छन् भन्ने ! वातावरण र अर्थशास्त्रको घनिष्ठ सम्बन्धको वकालत गर्ने उनी पछिल्लो समय विभिन्न विषयमा घरकै पुस्तकालयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्छन् । उनी अहिले खासै मिडियामा आउँदैनन्, अर्थात रुचाउँदैनन् आउन । उनले भने, ‘सकेसम्म म आफूबारे ‘मिडिया’मा आउन चाहन्न । प्रचार–प्रसारमा आउन मलाई खासै मन पर्दैन ।’
उनको अध्ययन गर्ने कोठामा दराजभरि पुस्तक पत्रपत्रिका टन्नै थिए । आफू बसेर अध्ययन गरिरहने कोठामा हामी प्रवेश गर्दा यस्तो लाग्थ्यो हाम्रो देशमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कोही छैनन् भनेर भनिरहँदा मिडियामा आउन नचाहने सिग्द्यालजस्ता अनुसन्धानकर्ताहरु धेरै नै छन् । सिग्द्यालजस्ता विज्ञहरुको विचार र दर्शन बाहिरिया दर्शनभन्दा मौलिक हुन्छ कि ! प्रशासन, न्याय सेवामा त हामीले आफ्नै परम्पराबाट आधुनिकतातर्फ अग्रसर हुने सम्भावना थियो नि ! हामी यस्ता विषयमा अलि गम्भीर भएको भए!
वातावरणवादी (यो उनकै शब्द हो) मात्र भनियो भने सिग्द्यालको परिचय अपुरो हुन्छ । उनी पूर्वपत्रकार, पूर्व निजामति कर्मचारी प्रशासन र अर्थशास्त्रका ज्ञाता पनि हुन् । २०२७/०२८ सालतिर त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको नाम चलेको आर्थिक विकास तथा प्रशासन केन्द्र (सेडा) मा ‘डंकी वर्क’ (उनकै शब्द) देखि लिएर अनुसन्धानको प्रस्ताव बनाउने कार्यसम्म गरे । अझ अर्काे छुटाउन नहुने कुरा विभिन्न पुस्तकका लेखक पनि हुन् । उनको सबभन्दा पछिल्लो पुस्तक हो– नेपाल, छिमेक र विश्व (माघ २०७३) ।
एसएलसीमा दुई पटक फेल
कृष्ण सिग्द्याल १९९९ माघ महिनामा काठमाडौंको लैनचौरमा आमा धर्मकुमारी, बुबा अमृतनाथ उपाध्यायको कान्छो सन्तानको रूपमा जन्मिएका हुन् । मन्टेश्वरी पढेर शान्ति विद्या गृह हाइस्कुलमा कक्षा १ देखि १० सम्म पढेका सिग्द्याल एसएलसीमा २ पटक अनुत्तीर्ण भए । त्यति बेलासम्म उनको ध्यान खेलकुदमा मात्रै थियो रे ।
दोस्रो वर्ष २०१५ सालमा पूरक परीक्षामा भने दोस्रो श्रेणीमा उच्च लब्धांकका साथ उत्तीर्ण भए । आइए पढ्न त्रि–चन्द्र कलेज भर्ना भएका सिग्द्यालले ‘आर्टस’ पढेका हुन् । नेपाली माध्यममा विद्यालयमा अध्ययन गरेका उनले त्रि–चन्द्रमा भने अंग्रेजी सुधार्ने राम्रै मौका पाएछन् । कोलम्बो प्लानअन्तर्गत आएका बेलायतका अंग्रेजी शिक्षक वेस्टकटले उनलाई घरैमा बोलाई अंग्रेजी मात्र पढाएनन्, त्यतिबेला झण्डै दुर्लभ अंग्रेजी बिस्कुट र केक पनि ख्वाउँथे रे । ‘घुम्न जाँदा पनि मलाई नै गाइडको रूपमा लिन थाले । मैले लेख्ने अंग्रेजीभन्दा बोल्ने अंग्रेजी अझै राम्रो हुन्छ भन्छन् साथीहरु,’ भन्छन् सिग्द्याल ।
उनी आफूले अब अंग्रेजीमा ‘अलि फरक’ खालको सञ्चारसम्बन्धी पुस्तक लेख्न लागेको पनि बताए । त्यति भन्न नपाउँदै बसिरहेको ठाउँबाट उनी एक्कासि उठे र भने ‘कुनै पनि यस्तो उमेर हुँदैन, सिक्नुनपर्ने होस्÷पढ्नुनपर्ने होस्’ त्यति भनेर आफूले कसरी पढ्छु भन्नेबारे अंग्रेजीको राम्रो उद्धरणका कापी ल्याएर हामीलाई देखाए । उनको पढ्ने शैली र मिहिनेत देखेर सायदै कोही प्रभावित नहोला ।
सिग्द्याललाई भविष्यमा राजनीति नै गर्छु भन्ने थियो रे । उनलाई आठ वर्षको उमेरदेखि नै कसैले त्यतातिर प्रेरित गराई दिएको रहेछ । आठ नौ क्लासमा नागरिक शास्त्र (सिभिक्स) पढ्दादेखि नै प्रजातन्त्र नै अब्बल राजनीतिक व्यवस्था हो भन्ने ठहर गरेछन् । नेपाल छात्र संघमा पदाधिकारी नै भएर काम गरे । एसएलसी पूरक परीक्षा पास गरी त्रि–चन्द्र कलेज भर्ना भएका उनी प्रवेशलगत्तै विद्यार्थी राजनीतिमा छिरी हाले । काठमाडौं छात्र संघको कार्य समिति सदस्यका नाताले विद्यार्थीहरुसँग नजिकको सम्पर्क राख्ने प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालासँग पनि सम्पर्कमा पुगे । केही महिनामै बीपी, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईहरु राजा महेन्द्रको ‘कु’ मा परेर काराबास भए ।
त्यसैको विरोध कार्यक्रमस्वरूप विद्यार्थी नेतृ शैलजा आचार्य सहितले फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा टुँडीखेलको खरीको रुखको मञ्चमा हुने कार्यक्रममा राजा महेन्द्रलाई कालो झण्डा देखाउने योजना भएछ । त्यसैमा सहभागी हुन सिग्द्याल घरबाट निस्कने तयारी गर्दै थिए । उनकी दिदीले ‘भाइ, कहाँ जान लागेको, तँबाहेक अहिले घरमा कोही पनि छैन, तँ भइनस् भने म कसरी बसुँला’ भनेर सबै कुरा थाहा पाए जसरी आश्चर्यजनक रूपमा उनलाई रोकिछन् । दिदीले त्यसरी सिग्द्याललाई आधा घण्टासम्म घरमै अल्मल्याई दिइछन् । तर प्रजातन्त्रलाई आदर्श ठान्ने, समाजवादप्रति आकर्षित उनी, दिदीलाई फकाइवरी कालो झण्डा देखाउन भेला हुने निर्धारित स्थल त्रि–चन्द्र/घण्टाघर पुगे । तर दुर्भाग्य, त्यहाँबाट टोली हिँडि सकेछ । समारोहमै उनीहरु सबै पक्राउ परेछन् । पछिपछि पनि सिग्द्याल कलाकार शशि शाहको टेबहाल घरको झ्यालबाट जेल भित्रको कार्यकलाप नियाल्थे रे । उनी भन्छन्, त्यति बेला जेल परेको भए मेरो जीवनले अर्कै बाटो लाग्थ्यो । पछि अर्कै तर्फ मोडियो ।’ तर राजनीतिक नेताहरुसँग उनको सम्पर्क पछिसम्म पनि टुटेन । पत्रकारिताले पनि सम्पर्क टुट्न दिएन ।
२०२५ साल भदौमा सरकारले सोच्दै नसोचेको एउटा विचित्रको घटना भयो । विकास सेवाका जम्माजम्मी १३०० कर्मचारीले उनीहरुलाई अन्याय प-यो भनी विरोध स्वरूप सामूहिक हड्ताल गरे । त्यसको योजना तथा कार्यान्वयनको नेतृत्व सिग्द्यालले नै गरेका थिए । त्यसको फलस्वरुप उनी सरकारी सेवाबाट खोसिए पनि, जबकि उनले खुला प्रतिस्पर्धाबाट परराष्ट्र सेवामा शाखा अधिकृत पदका लागि लोक सेवा आयोगको परिक्षासमेत पास गरिसकेका रहेछन् । ‘किन विरोध गरेको त ?’ ‘भनी सोध्दा उनी भन्छन्’ ‘त्यति बेलासम्ममा पञ्चायत व्यवस्था प्रजातान्त्रिक होइन भन्नेमा म दृढ भइसकेकाले— ‘हेर, विद्यार्थीले नगरेको काम कर्मचारीले गरेर देखाइ दिन्छ’ भन्ने जनाउन सिंहदरबारमा सामूहिक हड्तालको योजना गरेको । त्यसमा खोसिएका १५/१६ जना साथीलाई पुनः रोजगार दिलाउन उनी अनिच्छाका साथ आफू राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) मा प्रवेश गरेका रहेछन् । दुई महिनाका लागि गएका उनलाई त्यो पेसा मन परेछ र निरन्तरता दिएछन् । तत्कालीन विद्यार्थी नेता पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानालगायतलाई यसको आद्योपान्त जानकारी छ रे ।
पुँजीवादी देश अमेरिका
२०१७ साल पुस १ गते जेल पर्नुअघि उनीसँगको भेटमा बिपीले उनलाई इजरायल जान सुझाएका रहेछन् । उनी कसरी इजरायल जाने भन्ने सोचमा रहेछन् । त्यसैबीच एउटा अमेरिकी छात्रवृत्तिमा अमेरिका वा इजरायल पठाइने भन्ने रहेछ । ‘तोफेल’ जस्तै अमेरिकी सहयोग नियोगको ‘अब्जेक्टिभ’ अंग्रेजी परीक्षामा त्यतिबेलासम्मका सबै प्रशिक्षार्थीलाई उछिनेका उनी हाँस्दै भन्छन्, ‘पुँजीवादी देश किन जाने, हामी समाजवादमा विश्वास गर्नेले । अमेरिका पठाउने भन्दा तीन पटकसम्म मानिन, पछि इजरायल नै पठाउने भनेपछि बल्ल व्यावसायिक÷मेकानिकल विशेष कोर्समा २ वर्षका लागि इजरायल गएँ ।’
पौडी पोखरी र इजरायली प्रेमिका ?
इजरायल बस्दा उमेरअनुसार प्रेमस्रेम पनि गरियो कि ? भनी सोध्दा उनी अलि गम्भीर पनि भए र भने, ‘हाम्रो आवासमा एउटा राम्रो पौडी पोखरी थियो । त्यहीँ बस्नेबाहेक बाहिरबाट पनि मान्छे पौडी खेल्न आउँथे । त्यसै सिलसिलामा एकजना आमा नभएकी डाक्टरकी छोरी सराहसँग भेट भयो । उनी पौडी पोखरीमा निरन्तरजस्तै आउँथिन् र मेराबारे साथीहरुसँग पनि सोधपुछ गर्दी रहिछन् । तर, मैले यस कुरालाई अघि बढ्न दिइनँ । त्यत्तिबेला विदेशी महिलालाई बिहे गर्दा उनीहरु तथा आफूलाई पनि निकै गाह्रो हुन्थ्यो ।’ कैयन् नेपालीले त्यो भोगेको उनले राम्ररी नियालेका रहेछन् । नेपाली समाज अलि त्यस्तै थियो । उनको नेपालमै बस्ने दृढ ईच्छा र राजनीतिमा जाने आकांक्षामा सबै किसिमबाट बाधा पर्ने हुनाले त्यसतर्फ अघि नबढेको बताए । पौडी र पश्चिमा नाचमा दख्खल नै राख्ने सिग्द्याललाई शिक्षा र अन्य प्रसङ्गमा विदेशमा रमाउने र उतै बस्ने धेरै अवसर पछिसम्म प्राप्त भएका रहेछन् । तर उनलाई मुलुक छोड्न मन लागेन छ । सबै अवसरलाई उतै छोडी दिएछन् ।
बिए लगायत स्वाध्यायन
इजरायलबाट फर्केपछि भने उनीले स्वाध्यायन गरे तर कलेज गएर होइन । पुराना साथीभाइ खोज्दै, सँगै पढ्दै सबै डिग्री हासिल गरे । सरकारी जागिर, रासस, सिडाको प्राज्ञिक काम र फेरि रासस र भारतीय दैनिक ‘इण्डियन एक्सप्रेस’ को विशेष समाचारदाताको काम पनि हिँड्यो समय साथसाथै ।
हाजिर गर्न पाँच थरी आवाज
सिग्द्यालले कानुन पनि पढेका हुन् । कानुन पढ्दाको रमाइलो कुरा भने कहिल्यै बिर्सँदैनन् । समाचार सम्पादन गर्ने बेला साँझ सबैजना सँगै कलेज जान नपाउने, तर मुटकोर्टको हाजिरी अनिवार्य थियो । साथीहरुले उनलाई हाजिर गरिदिन भन्दा रहेछन् । कहिलेकाहीँ त पाँचजनासम्मको पनि हुने । उनले एउटा ‘उपाय’ लगाएछन् । त्यो के भने पाँचजना साथीको हाजिर गर्दा पाँच थरी आवाज निकाल्ने, कहिले बसेर त कहिले उठेर ! एकदिन गुरुले शंका गरेछन् । उनी भन्छन्, ‘गुरुले तपाईं फलानो हो र ? भनेर सोधे । साथीको नाम लिँदा म नै त्यो मान्छे हो भनेर अड्डी कसें । झण्डै सय जनाको कक्षामा खासै पत्तो नै हुँदैन्थ्यो’ ।
उनले आफ्नो डेढ वर्षे नेपालको कलेज लाइफको कुरा गर्दा साथीभाइको धेरै पटक नाम लिए । उनका साथीहरुमा कलाकार शशि शाह, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा, श्रष्टा यादव खरेल, ईन्द्रबहादुर श्रेष्ठ (उनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त पनि भए), पुष्कर पन्त (गणितिज्ञ) र दिनेश कोइराला आदि थिए । उनी ‘आफू बाहेक’ सबै जना आ–आफ्नो क्षेत्रमा अब्बल भए भन्छन् । उनले भने यति मज्जाले मिलियो कि अहिले सम्झिँदा पनि बडो आनन्द आउँछ ।’ भेटघाटमा उनको सरलता, शालीनता र शब्दको चयन मार्मिक थियो । कलेजका ती साथीभाइका बीच अहिले पनि पालैपालो गरी समूह भेट हुने चलन रहेछ ।
अहिलेका पुस्ता पृथक
सिग्द्याल अहिले हजुरबुबा भइसके । मुसुक्क मुस्कुराउँदै उनले भने ‘१२ वर्ष लागेको नाति म भन्दा अग्लो छ, नापिन पो आउँछ’ । आफ्नो पुस्ता, छोराछोरीको पुस्ता हुँदै नातिनातिनीको पुस्तासम्म आइपुग्दा अहिलेका बच्चा जिज्ञासा र अवसरका हिसाबले भाग्यमानी भएको बताए । उनले भने, ‘अहिलेका बच्चामा सिक्ने उत्सुकता धेरै छ । उनीहरुमा आत्म–विश्वास पनि छ । यो पुस्ता देख्दा मलाई निकै खुसी लाग्छ’ । उनी नेपालको भविष्य यो नाति पुस्तामा छ र यिनलाई बाटो लगाउने आजको अहं प्रश्न हो भन्छन्।
‘तपार्इंले धेरै क्षेत्रमा हात हाल्नु भयो त’ भनी सोध्दा जीवनमा आफूले विशेषता के मा हासिल गर्ने त भन्ने कुरामा घोत्लिँदा वातावरणको क्षेत्रलाई छाने भन्छन् । उनी नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज) को संस्थापक अध्यक्ष हुन् । दक्षिण एसियाकै पहिलो सामूदायिक रेडियो सगरमाथाको भातृसंस्था नेफेज नै हो । नेफेज संघ संस्था दर्ता गर्न नपाइने पञ्चायत व्यवस्थामै उद्योग विभागमा दर्ता भई सुरु भएको हो । उनी पढे लेखेका जो कसैले पनि आजकल एउटा क्षेत्रमा विशिष्टीकरण गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
प्रकाशित: २४ असार २०७५ १२:१८ आइतबार
दिदीका कारण जेल जानबाट बचेँ नागरिक परिवार